Cabsi iyo wel wel la soo deristay musliimiinta Mareykanka ka dib guushii Donald Trump - iftineducation.com
Cabsi iyo wel wel la soo deristay musliimiinta Mareykanka ka dib guushii Donald Trump
iftineducation.com – Cabsi iyo wel wel la soo deristay musliimiinta Mareykanka ka dib guushii Donald Trump
Doorashaddii ka dhacday maalin ka hor dalka Mareykanka ee si weyn ugu kala qeybsameeyn dadka dalkaasi, oo ay ugu dameyntiina guusha ku raacday musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee Donald Trump, ayaa muslimiinta dalkaasi oo soomaalidu ka mid tahay waxaa la soo dersaday cabsi iyo wel wel la xirriira inuu kordho naceybka loo hayo muslimiinta dalkaasi.
Cabsida iyo wel wel-kan ayaa labbo jibaarmay markuu guushu ay raacday Donald Trump oo intii uu socday ollolahiisii doorashadda sheegay marar badan inuu naceyb darran u hayo muslimiinta dalkaasina ka mumnuuci doono ineey soo galaan Mareykanka. Afhayeen u hadlay Gollaha xirriirka muslimiinta Mareykanka (Council on American-Islamic Relations) ayaa sheegay ineey cabsi ka qabaan talaabooyinka haatan xigga guushii Donald Trump kadib ee caalamka shooga ku riday. Wuxuu sheegay in muslimiin badan ay wadnaha farta ku hayaan in la bartilmaameedsado.
Walaaca muslimiinta Mareykanka haya ayaa si weyn waxaa si weyn looga dareemayey baraha bulshaddu adeegsato, iyagoo si aan kala joogsi laheyn ugu qorayey dareenkooda, gabar ka mid ah gabdhaha adeegsada barta tuwiter-ka (twitter) ayaa ku soo qortay in hooyadeed kula talisay ineey iska dhigto xijaabka marka ay banaanka u baxeeyso si aan kooxaha naceybka muslimiinta u haya u geeysan dhibaato. Qof kale oo isagana adeegsada baraha bulshadda ayaa sidaas si lamid ah ku soo bandhigay dareenkiisa cabsi. “Walaashey iga yar ayaa igu tiri waxaan wel wel ka qabaa muslinimadeeyda, waxaan ku aamusiyey ineeysan cabsoon oo kooxda Trump hogaamiyo aan wax u dhimi karin” Mana ahan labadaa qof ee baraha bulshada ku soo qoray cabsida ay ka qabaan isbadalada siyaasadeed ee dalkaasi iyo sida uu saameyn ugu yeesho muslimiinta.
Ugu dameyntiina waxa afhayeenku sheegay in waqtiga soo socda sheegi doona in hadaladdii Donald Trump ay ahaayeen masraxiyad siyaasadeed oo u dhigayey ama xaqiiq daba socota ninkaa aan hadaladiisa loo dulqaadan karin ee Donald Trump.
Donald Trump oo caan ku ah aflagaado ka dhan ah muslimiinta caalamka gaar ahaan soomaalida iyo haweenka oo si gaar ah farta ugu fiiqi jiray ayaa ku soo baxay doorashaddii maalintii talaada ka dhacday dalkaasi. Calaamka ayaa si weyn uga naxay una fileyn inuu cod aqlibiyad leh ku soo baxayo.
gabdhaha wasmada jecel sida lagu garto daawo